Khipha ku-internet IP1200 Electric Linear Actuator Manufacturer and Factory | IHoodland
Amakholomu Okuphakamisa Ugesi
IP1200 Series Electric Linear Actuator
● UMax Thrust: 2500 N
● Umsindo ophansi
● Isivinini esikhulu: 88mm / s
Incazelo YomkhiqizoAma-IP1200 Series Electric Linear Actuators, afaka izinto eziqinile, ezisezingeni eliphakeme ukuqinisekisa ukusebenza okungenazinkinga. Ama-gearings e-rugged, ama-lubrificants ekhwalithi yendiza, ishubhu lokunweba elingonakalisi kanye nama-motors wokusebenza okuphezulu ngokuvikelwa okushisayo kunikeza impilo ephezulu nenani kumsebenzisi. Lolu chungechunge lungasetshenziswa kabanzi emkhakheni wezokwelapha, ekhaya elihlakaniphile, ezishintshayo zasefektri njll.
I-Electric Linear Actuator iyingxenye yephothifoliyo yethu yemikhiqizo eshukumayo. Achazwa njengedivayisi eguqula ukunyakaza okujikelezayo kube ukunyakaza okuqondile.
Uma udinga idivayisi elula evumela ukunyakaza okushelelayo, okunembile nokuphephile esikhaleni esincane i-actuator eqondile kagesi ilungile. Ngokungafani ne-actuator ye-hydraulic edinga uketshezi, ama-valves aphezulu kanye namaphampu, i-actuator eqondile kagesi isebenzisa imoto ye-DC, ukunciphisa izindleko zokusebenza jikelele ngenkathi inikeza i-actuator engenabuthi futhi eyonga amandla. Nge-actuator eqondile, futhi ungafezekisa ukulawula okukhulu kwedivayisi ngomsindo omncane wokusebenza. IP1200 chungechunge yomugqa actuator kuzoba okukhethayo best.
Zingasetshenziselwa izinhlelo eziningi ezijwayelekile zezimboni noma ezithile. Bayakwazi ukusebenza ngamandla aphezulu omthwalo, isivinini sokusebenza esiphakeme kanye nezinhlelo ezenzelwe ubuhle. Ama-actuator womugqa asetshenziswa kumathuluzi wemishini, imishini yezimboni, ihhovisi noma i-automation yasekhaya kanye nezinhlelo zokulandela amandla elanga.
Uchungechunge lwe-IP1200 njengochungechunge lwethu oludume kakhulu olunenzuzo kukho konke ukusebenza kahle nokonga, ungomunye wemikhiqizo yethu ethandwa kakhulu.
I-voltage yokufaka yochungechunge lwe-IP1200, esingayinikeza nge-DC 12V, DC 24V, DC 36V, konke kuya ngesidingo sakho.
Ubude be-stroke buvela ku-30mm kuye ku-1000mm, uma kunesidingo esikhethekile mayelana nobude, sicela ukhululeke futhi uxhumane nathi, sizokuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka sithola imiyalezo.
Umthwalo wokucindezela umthwalo (olingana nomthwalo wokudonsa umthwalo), usuka ku-200N kuye ku-2500N, owenziwe ngejubane lokungalayishi, isivinini esiphakeme sokungalayishi, esincane somthwalo we-push Push (donsa). Ngamanye amagama, i-actuator eqondile ye-IP1200 ingadudula / idonse ama-20kgs ezintweni ezingama-250kgs (ezilingana nama-44lbs kuye ku-550lbs). Uma kukhona ukudideka noma umbuzo, vele uxhumane nathi ngokukhululekile.
Uma kuqhathaniswa nezinye, iHoodland inaka kakhulu ikhwalithi, wonke umkhiqizo uyahamba yize uchungechunge lwezivivinyo ngokusho kokucaciswa kokusebenza kwe-canonical kanye nokujwayelekile ngaphambi kokulethwa.
Izici● Umbala: mpunga
● I-Voltage yokufaka: DC 12V / DC 24V / DC 36V
● Idizayini ehlakaniphile
● Ukusebenza okuzinzile
● Aluminium ingxubevange igobolondo, ukwelashwa blackening
● Ukuvikelwa: finyelela ezingeni le-IP54
● Ukushintshwa komkhawulo we-Bulit-in
● Izinga lomsindo ≤ 48dB
Langaphambilini IP800 Electric Linear Actuator
Olandelayo: IP6000 Electric Linear Actuator
I-Dc 24v Linear Actuator
Okusanhlamvu Ukuphathwa Actuator
I-Low Noise Linear Actuator
I-Recliner Linear Actuator
Ikheli:No.31-35 Lingxi District Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Isifundazwe Zhejiang, China
I-Forage Abavuni Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator, Electric Linear Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, Isilinda Actuator,